Wargeysyada Carbeed Maxay Ka Qoreen Go’aanka Falastiin Ku Diiday Gudoomiyenimada Jaamacadda Carabta? – Borama News Network
Wargeysyada Carbeed Maxay Ka Qoreen Go’aanka Falastiin Ku Diiday Gudoomiyenimada Jaamacadda Carabta?
Wargeysyada Carbeed ee saaka soo baxay ayaa ka hadlay go’aanka Maamulka Falastiiniyiintu ku diiday in uu qabto xilka gudoomiyenimada Jaamacadda Carabta oo doorkan ku soo beegmay iyaga, sababtuna ay tahay in ay kaga falcelinayaan in Jaamacaddu ” ku fashilantay”in ay canbaarayso heshiiska dalal Carbeed iyo Israel dhawaan dhex maray.
Faallooyinka qaarkood waxay diiradda saareen talaabada ugu haboon ee ay qaadi karaan Falastiiniyiintu ee ay kaga falcelin karaan labada heshiis ee ay Imaaraadka iyo Baxrayn la galeen Israael.
“Damaashaadka heshiiska Carbeed iyo Israel”
Wargeysyada Falastiiniyiinta ee maanta soo baxay waxay badankoodu ka warameen go’aanka Maamulka Falastiiniyiintu ku diiday qabashada xilka guddoomiyenimada ee doorkan.
Faallo uu ciwaan uga dhigay “Anaga, Jaamacadda Carabta iyo u guclaynta Israel” ayaa wargeyska Al-Qudus ee Falastiin ku yidhi “Ururka Jaamacadda Carabtu mudadii dheerayd ee uu jiray marnaba go’aan la taaban karo kama uu qaadan qaddiyad laga dooday oo la soo hordhigay. Had iyo goorna waxa uu raacaa hadba waxa ay doonayaan dalalka xubnaha ka ah iyo danahooda gaarka ah. Sidaa awgeed markii la horkeenay in laga doodo arinta xidhiidhka Imaaraadka iyo Baxrayn la yeesheen Israel, waxaabad moodaysay mawqifka ururku inuu noqday inuu si buuxda u taageerayo arintaas oo xataa erayo uu ku cambaaraynayo muu soo saarin”.
Wargeysku waxa uu intaa ku daray “anagu haddii aynu Falastiiniyiin nahay, maadaama arintu sidaa tahay, ma doonayno in aanu ka baxno ururkan kaalintiisii ka soo bixi waayey. Laakiin waxaanu qaadanay mawqif fariin diraya oo ah in Maamulka Falastiiniyiintu diiday in uu qabto guddoomiyenimada ururka Jaamacadda Carabta ee haatan si uu u muujiyo inuu ka xun yahay mawqifka ururku qaatay. Tallabadaasina waa mid sax ah oo loo baahnaa sababta oo ah qadiyadda Falastiin mahaa wax afka uun laga sheego ee waa qaddiyad waddani ah oo ka turjumaysa aragtida iyo mawqifkeenna”.
Wargeyska Al-Ayaam ayaa isna qoray “ururka Jaamacadda Carabtu wuu hagaasay oo wuu diciifay, faa’iido uu leeyahay na ma jirto. Sababta oo ah marnaba muu difaacin aragti Carbeed oo ah in la midoobo iyo hurumar toona, waxaa bu se dhawr goor ku kala qaybsamay arimo waaweyn iyo xataa kuwo yar yar oo gobolka ka dhacay, arintaasina waa mid aan weli ka bi’in xusuusta dadka”.
Ayey dani ugu jirtaa?
Wargeyska Al-Quds Al-Carabi ee ka soo baxa London ayaa faalladiisii ku yidhi “waxa Maamulka Falastiiniyiintu dorraad shaaciyey in aanu qabanayn guddoomiyenimada ururka Jaamacadda Carabka, arintaas oo uu ku cabirayo sida uu uga xunyahay in Jaamacadda Carabtu diido in ay dhaleecayso heshiisyada dalalka Carbeed iyo Israel dhex maray dhawaan. Laakiin Maamulku kamuu bixin ururka, go’aankiisaasina wuxu uga dan leeyhay in uu si adag ugu muujiyo in Falastiiniyiintu ku dhegan yihiin mabda’ooga.”
Qoraaga Caadil Sulaymaan ayaa maqaal uu ku qoray wargeyksa Al-Carabi Al-Jadiid ee ka soo baxa London, waxa uu ciwaan uga dhigay “go’aannada adag ee hor yaal Falastiiniyiinta” ayaa waxa uu ku yidhi ” hiilkii Carbeed way waayeen Falastiiniyiintu, qadiyadadooduna waxay ku soo ururtay sidii ay ahayd oo ah in ay tahay qadiyad waddaniyadeed oo Falstiiniyiintu ku keli yihiin.”
Sulaymaan waxa uu intaa ku daray “hadba waa maxay mawqifyada adag ee horyaal Falastiiniyiintu? Looma baahna in waano loo gudbiyo Falastiiniyiinta sababta oo ah 72 sano ayaa lagu waday. Laakiin waxa haatan cadaaday waxa weeyi in ay iyagu yihiin cidda keliya ee garan karta mawqika ay u baahanyihiin in ay qaataan iyo fahamka go’aamada dawladaha gobolka iyo kuwa duniduba ay ku yeelan karaan qaddiyadooda. Uma baahna mutacalimiin iyo dad aqoonyahan ah oo garaad kuma yara, waxa keliya ee ay u baahan yihiin waa in ay midoobaan oo ay mawqif waddani ah oo ay ku midaysan yihiin gaadhaan. Waa in aad idinka oo midaysan gaadhaan go’aanno ku haboon qadiyadiina maadaama dhulku yahay dhulkiinii, xaqa maqan ee la goobayaana yahay xaqiiana. Waxaanad ogaataan in aan ummaduhu baabi’in inta ay leeyihiin rabitaan ee halganna ka go’an yahay.”
Haseyeeshee waxa jiray qaar ka mid ah dadka wax qora oo go’aanka Maamulka Falastiiniyiinta dhaliilay.
Baasil Turjumaan oo maqaal uu ku qoray wargeyska Al-Dastuur ee ka soo baxa Urdun ciwaan uga dhigay “Falastiiniyiinta is go’doominayaa ayey u danaynayaan?” ayaa waxa uu ku yidhi “cidda keliya ee go’aankaa Falastiiniyiinta ka faa’iidaysanaysaa waaa Israel oo maqnaanshaha Falastiin ku heli doonta fursad ay ku xodxodato dunida iyo dalalka jaarka ah ba maadaama oo ay Falastiiniyiintu si aan maan gal ahayn oo aan la fahmi karin uga gaabinayaan difaaca qadiyadooda, amaba ay gole kastaba ka garnaqsadaan si ay u muujiyaan in dooddoodu tahay mid xaq ku salaysan oo cadaalad ah.”
Xulka Kubada Cagta Gobolka Awdal Oo Borama Lagu Soo Dhaweyay
Diyaaradihii Uu Imaaraadku Geeyay Giriiga Oo Go’doon Galay Iyo Sobobta
Nuuc Cusub Oo Cudurka Coronavirus Ah Oo Lagu Arkay Qaar Ka Mid Ah Dalalka Caalamka Iyo Xayiraado Lagu Dhawaawaqay
Gabdh Somaliyeed Oo Ku Guulaysatay Abaal Marin Caalimi Ah Iyo Waxa Ay Ku Mutaysatay